Ferdinand oo daaha ka qaaday Fariin uu Ronaldo u soo qoray ka dib markii uu shabaqa soo taabtay Kulankii Villarreal | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Ferdinand oo daaha ka qaaday Fariin uu Ronaldo u soo qoray ka...
Ferdinand oo daaha ka qaaday Fariin uu Ronaldo u soo qoray ka dib markii uu shabaqa soo taabtay Kulankii Villarreal
Rio Ferdinand ayaa daaha ka qaaday in Cristiano Ronaldo uu farriin u diray isaga oo ku adkeystay inuu ogaa inuu gool ka dhalin doono Villarreal ka dib markii uu shabaqa soo taabtay goolkii ugu dambeeyay ee Manchester United.
Wiilasha Ole Gunnar Solskjaer ayaa dib u dhacay markii Paco Alcacer uu gool ka dhaliyay karoos uu soo dhigay Arnaut Danjuma qeybtii labaad.
Alex Telles ayaa u barbareeyay kooxda martida loo ahaa kubbad laad xor ah oo uu soo tuuray Bruno Fernandes ayaa ka faa’iidaystay.
Isagoo sameeyay rikoorkii 178 -aad ee tartanka, Ronaldo ayaa mar kale noqon doona geesiga United ka dib markii uu shabaqa soo taabtay daqiiqaddii shanaad ee waqtiga lagu daray..
Waxa uu ahaa goolkii 12 -aad ee xirfadda Champions League ee 36 -jirka daqiiqaddii 90 -aad ama ka dib – oo ah laba jeer oo aad ugu dhow Lionel Messi oo leh lix gool – halka uusan jirin ciyaaryahan dhaliyay in ka badan saddexdii gool ee guusha 90 -ka daqiiqo ee uu dhaliyay taariikhda tartan.
Isagoo la hadlayay BT Sport ciyaarta ka dib, daaficii hore ee United Rio Ferdinand ayaa daaha ka rogay wixii uu Ronaldo fariin u diray ciyaarta ka dib, sidoo kale wuxuu ammaanay saamaynta dejinta iyo dhiirrigelinta uu ku leeyahay saaxiibbadiisa.
“Isaga (Ronaldo) ayaa ii soo qoray fariin isagoo leh‘ ’si fiican uma ciyaarin laakiin waan ogaa inaan gool dhalin doono,’ ’ayuu yiri Ferdinand.
Previous article“Tartanka waan isaga haray markii ay odayaashu iiga baqeen inaan Siyaad Barre oo kale ku noqdo” + Video
Next articleVan De Beek oo si Caro leh Xanjo ugu tuuray Tabare Ole Gunnar Solskjaer
Hordhac: Watford Vs Liverpool ee Horyaalka Premier League, Diogo Jota iyo...
Claudio Ranieri ayaa isku diyaarinaya kulankiisii ​​ugu horreeyay ee Premier League, iyadoo kooxdiisa Watford ay ku soo dhaweynayso Liverpool Garoonka Vicarage Road. The Hornets ayaa...
Sawirro: Shirkada Somtel oo toddobaadkii 12-aad abaal-marisay 1000 macaamiil